Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara Kimpembe. Onye nlekọta anyị bụ Kimpembe Child Story and Unold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ akụkụ nke ụmụ nwoke 23 Òtù ndị France nke meriri 2018 World Iko na Russia. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Presnel Kimpembe Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Presnel Kimpembe na 13th nke August 1995 na Beaumont-sur-Oise, France. A mụrụ ya nna Isaac Isaacpembe na onye Haitian nne a maara obere banyere.
N'ịbụ onye na-eto eto na France, Young Kimpembe (nke dị n'etiti ụmụnne ya ndị okenye abụọ) hụrụ nne na nna ya n'anya, bụ ndị nwere ọchịchọ dị ukwuu ma na-emekarị ka ọ mara na ọ nwere ọtụtụ uwe na-eyikarị mma na-agbaso ya.
Tụkwasị na nke a, ha nyere ya ohere ịhapụ ịchọrọ mmasị ya maka football site n'ịbanye na ya AS Eragny na 2002 mgbe ọ bụ agadi 7. N'ihi ya, Kimpembe dị ka ọtụtụ kpakpando bọlbụ malitere ọrụ ịgba chaa chaa site n'ịkụ egwu maka ndị ntorobịa.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Kimpembe nọrọ afọ atọ na AS Eragny tupu ịkwaga nku nke ndị ntorobịa nke ụlọ ọrụ ụgbọelu French, Paris Saint-German na 2005 (na-akpọ ya PSG scouts).
Ọ bụ na Paris Saint Germain umuaka ntorobịa na onye na-eto eto ọgụgụ isi gosi na ọ bụ nhọrọ dị ogologo nhọrọ ogologo oge maka PSG mgbe ọ malitere àgwà ya football ugbu a dị ka; obi ụtọ, ịgụ egwuregwu na egwuregwu.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Bilie Iji Mara Aha
Afọ asatọ ka nke a gasịrị, a kwalitere Kimpembe na PSG ndị ọkachamara na 2013 ma mee ka ọ bụrụ ọkachamara na mbụ maka ụlọ ọrụ ahụ na October 2014. Ngosipụta ya nke ọma na ngwugwu egwuregwu na ime mgbanwe maka ọrụ ndị na-agbanwe agbanwe nwetara ya ndị nwere mmasị na-ele ya anya dị ka onye kwesiri ịbụ onye na-amalite mgbe niile.
Ndị a ma ama n'etiti ndị Kimpembe na-achọsi ike bụbu France na onye na-akwado Arsenal bụ William Gallas, bụ onye na-akpọ ya "ọdịnihu nke football French". Oge na-aga n'ihu na Kimpembe egosiwo na ọ ga-abụ ọdịnihu nke French Football site n'inwe ọtụtụ ntụrụndụ na-enweta mmeri maka ọgbakọ na obodo ndị ọzọ gụnyere Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophee des Champions na 2018 World Cup na Russia. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mmekọrịta
N'azụ onye ọ bụla French Player bụ ihe mara mma egwuregwu ma ọ bụ Nwanyị na Kimpembe ikpe abụghị ihe ọzọ. Onye na-ekwe nkwa nwere onye nwere ọmarịcha egwu nke aha ya bụ Sera.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ntakịrị ihe a maara banyere mmekọrịta ha nyere na Kimpembe hụkwara ndụ ya n'anya. Otú ọ dị, Sera na-abịa dịka ọmarịcha egwu nke Kimpembe ga-achọ ịnọgide na-akwụ.
Mmekọrịta ha mepụtara nwa nwoke nke Kimpembe na-enwe obi ụtọ na ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị igosi ya na mgbasa ozi ọha na eze ya na ihe enyemaka dị egwu. Ọ na-akpọ "Lion Lion" a nke na-akọwa otú ọdụm na-ebu nwa ha.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Nkwado ndị nne na nna
Kimpembe nwere ezinụlọ na-ahụ n'anya nke na-akwado ọrụ ya ma ghara ịkwụsị inye ya nkwado omume.
Papa m bụ onye na-ekiri ya mgbe nile na-ele ya anya site na nkwụsị. Ọnụnọ ya na-echetara kpakpando nke mkpa ọ dị n'elu egwuregwu ya.
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ banyere nne mama Kimpembe bụ onye ọ kọwara dịka:
Naanị onye na-agaghị ata ụta m, ọ bụ naanị onye m na-enweghị obi abụọ, ọ bụ naanị onye na-ahapụghị m ala nakwa na ebe ọ bụ na mbụ m ❤️ Mama ❤️
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ihe omumu oge
Kimpembe bụ onye maara otú e si eji oge ya eme ihe na itinye uche n'ekpere. Ọ na-eme nke a site na igwu egwuregwu vidio ma na-ele ihe nkiri nkiri mgbe ụfọdụ ka ọ nwee ike ihu egwuregwu dị mkpa.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Eziokwu ahụ
Ọtụtụ na-ele ya anya dịka ọ bụghị onye ọkpụkpọ kachasị egwu, ma ọ bụ nke kachasị aka, ma onye ọ bụla kwenyere n'ọrụ siri ike na mkpebi siri ike ya
Kimpembe nwere mmasị n'echiche echiche, ọ bụghị ihe ijuanya na Adidas mere ya ka ọ bụrụ ihu Adidas Glitch (otu akpụkpọ ụkwụ na abụọ Skins ọzọ, nke na - enyere mmadụ aka ịgwakọta n'ụdị) na Paris
Onye na-emebu nchịkwa na-anọchite anya ya mgbe ọ gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ọganihu Kimpembe ka ọ bụrụ onye a ma ama bụ ịdị umeala n'obi, ntọala nke omume ọma niile.
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -anu ulo
Kimpembe nwere mmasị na nkịta abụọ aha ya bụ Letty na Nala nọ n'ụlọ ya.
E wezụga iwe foto nke anụ ụlọ ya (ma ọ bụ ndị enyi kwesịrị ntụkwasị obi) Kimpembe na-ewepụ foto foto ndị ọzọ nke duo nke ọ na-etinye na mgbasa ozi mgbasaozi.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Presnel Kimpembe Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.